(2)I-Irish Pub eneGumbi Akukho isidlo sakusasa - I-Airbnb
(2)I-Irish Pub eneGumbi Akukho isidlo sakusasa
UEamonn ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
I-Pub yethu yesiNtu yaseIrish ibekwe embindini, kumgama wokuhamba wemizuzu emi-5 kuzo zonke iindawo ezinomtsalane zesixeko. Indawo yokupaka ikwi-100m kude ngexabiso le-€ 2 ngosuku. Uloliwe/Isikhululo sebhasi sivale. Igumbi lamawele een-suite, i-wifi yasimahla, iti/ikofu, iTV.
Undwendwe Yiba 24hr ezahlukeneyo Ufikelelo kumagumbi ukusuka pub.
Ukufikelela kwiWifi yaMahala kunye nezixhobo zasekhitshini ekwabelwana ngazo (Akukho Pheki)
4.70 out of 5 stars from 478 reviews
4.70 · Izimvo eziyi-478
Izimvo eziyi-2 862
Ngalo lonke ixesha kukho umntu oza kubonelela ngonxibelelwano oluninzi okanye oluncinci njengoko iindwendwe zifuna